National Power News:: भन्नुहोस् त, तपाईसँग भएको सबैभन्दा मूल्यवान् चिज के हो ? National Power News:: भन्नुहोस् त, तपाईसँग भएको सबैभन्दा मूल्यवान् चिज के हो ?
१७ जेठ – सोच्नुहोस् त, तपाईंको एउटा हातको मूल्य कति होला रु एक लाख, पाँच लाख ? के तपाईं आफ्नो औंलाहरु दुई लाख रुपैयाँमा बेच्न चाहनुहुन्छ ? आँखा नि ? कति रुपैयाँमा बेच्न तयार हुनुहुन्छ रु २० लाख रु वा त्यो भन्दा कति बढी ? यी प्रश्नहरु मन्थन गर्दा तपाईं पक्कैपनि भावशून्य हुनुभयो । अर्थात तपाईंसँग यी प्रश्नहरुको कुनै जवाफ छैन । जवाफ एउटै छ, यी कुराहरुको कुनै मोल छैन । अर्थात अनमोल छ ।
तपाईंसँग भएको मोटरसाइकल दुई लाखमा खरिद गर्नुभएको थियो ।
के त्यसलाई तीन लाखमा बेच्न चाहनुहुन्छ ?
किन नचाहनु ? यो त गजब कुरा हो । तपाईसँग जुन मोबाइल छ, त्यो एक लाखमा बेच्ने हो ?
पक्कै पनि ।
तपाईंसँग भएका हरेक भौतिक बस्तु बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ, यदि त्यसको उचित मोल पाउनुभयो भने । तर, शरीरको कुनैपनि अंग बेच्न सक्नुहुन्न । किनभने शरीर अनमोल छ । शरीर कति महत्वपूर्ण छ ? कति मूल्यावान् छ ? यो कुरा त तपाईंले अनुभूत गर्नु नै भयो । तपाईंको शरीरको एक-एक अंग, जो गुमाएपछि फेरि प्राप्त हुँदैन । र, यो जीवन पनि तपाईंले फेरि पाउनुहुन्न । कति मूल्यावान् जीवन ?
सम्झनुपर्ने कुरा के पनि भने, संसारका हरेक व्यक्ति धनी बन्न चाहन्छन्, तर, आफ्नो शरीरको मूल्यमा होइन । दुनियाँका मानिस सफल हुन चाहन्छन्, तर आफ्नो स्वाथ्यको मूल्यमा होइन । किनभने सबैका लागि सबैभन्दा मूल्यवान् बस्तु उसको शरीर हो । अर्थात, जसको स्वास्थ्य राम्रो छ, ऊ आफैमा सफल हुन् ।
जतिसुकै पैसा खर्च गरेर पनि तपाईंले आफ्नो लागि अर्को शरीर खरिद गर्न सक्नुहुन्न । जतिसुकै खर्च गर्नुहोस्, तर तपाइले त्यसको बदलामा राम्रो स्वास्थ्य खरिद गर्न सक्नुहुन्न ।
सोध्नुहोस् आफैंलाई यी प्रश्न
भनाईको सार के हो भने, तपाईंको जीवनको सबैभन्दा मूल्यवान् चिज नै तपाईंको शरीर हो, स्वास्थ्य हो । तर, शरीर यति मूल्यवान् हुँदाहुँदै पनि तपाईं किन यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ ? के तपाईंले आफ्नो शरीर एवं स्वास्थ्यका लागि केही गरिरहनुभएको छ ? शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि के-कस्ता तरिका अपनाउनुहुन्छ ?
सोच्नुहोस् त, तपाईं दिनमा कति पटक आफ्नो शरीर वा स्वास्थ्यको बारेमा घोत्लिनुहुन्छ ? कति समय स्वास्थका लागि खर्चनुहुन्छ ? यो प्रश्न तपाईंका लागि कठिन हुनसक्छ । किनभने, हामी काम, करियर, पैसा, परिवार, आफन्त, समाज सबैको बारेमा सोच्दा सोच्दै आफुलाई भुल्न पुग्छौं । आफ्नो शरीरलाई घोट्छौं, दुख दिन्छौं । तर, विश्राम दिदैनौं । पैसा र करियरको चक्करमा यसरी लाग्छौं, मानौ शरीर केवल घोडा मात्र हो ।
अचम्मलाग्दो त के भने, तपाईं आफ्नो गाडी, मोटरसाइकलको ख्याल गर्नुहुन्छ । कुनै इन्जिन खराब हुनसाथ त्यसको मर्मत गर्नुहुन्छ । समय-समयमा सर्भिस सेन्टरमा पुर्‍याउनुहुन्छ । धोइ-पखाली गर्नुहुन्छ । अब आफैलाई एउटा प्रश्न गर्नुहोस्, के तपाईंले यसैगरी आफ्नो शरीरको पनि उचित रेखदेख गरिरहुनभएको छ ?
हेर्नुहोस् फर्केर आफ्नै दिनचर्या
हामी त चाहन्छौं कि दिनभर पैसाकै खातिर दौडिरहूँ । बिहान उठ्छौं, हामीसँग मनतातो पानी पिउने फुर्सद हुँदैन । फेसबुक खोलेर करियर, पैसाको बारेमा कुरा गर्न थाल्छौं । केवल ४५ मिनेट व्यायाम गर्ने समय हामीसँग हुँदैन । मर्निङ वाक गर्ने, व्यायाम गर्ने, योग-ध्यान गर्ने समय नै हुँदैन । बरु, त्यो समयमा हामी चिया र चुरोटको सर्को लिदै घरजग्गा खरिद-बिक्री वा आफ्नो पदोन्नतीका विषयमा चर्चा गर्छौं ।
बिहान उठेर हामीलाईं ब्रेकफास्ट गर्न झन्झटिलो लाग्छ । ब्रेकफास्टका लागि लाग्ने खर्च र समय नै हामी जुटाउन कन्जुस गछौर्ं । ब्रेकफास्ट गर्नुभन्दा तात्तातो दुधको चिया पिएर राजनीतिक गफ गर्न बढी स्वाद लाग्छ हामीलाई ।
तपाईंसँग करोडौं व्यांक ब्यालेन्स होला । तपाईंसँग आलिसान महल होला । तपाईंसँग आरमदायक गाडी होला । नोकरचाकर होलान् । केही कुराको कमी नहोला । तर, यी कुराहरुबाट त्यसबेला मात्र तपाईंले आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जब तपाईंको शरीर स्वस्थ्य हुनेछ ।
दिनभर शारीरिक रुपले सक्रिय हुन जाँगर चल्दैन । आफ्नै अगाडिको फाइल ल्याउनरपुर्‍याउन पनि हामीलाई सहयोगी चाहिन्छ । कुर्सीमा बसीबसी सबै काम फत्ते गर्न मन लाग्छ । सानोतिनो घरायसी काम गर्न पनि जाँगर चल्दैन । न हामीलाई कुचो लगाउन मन लाग्छ, न करेसाबारीमा गएर गोडमेल गर्न नै । बरु, त्यो समयमा कुनै पत्रिकामा आँखा डुलाउँदै चिया र चुरोट तान्न मन लाग्छ ।
दिनभर हाँस्न, पानी पिउन पनि हामी कञ्जुस्याँई गर्छौं । साँझ घर फर्केपछि सूर्योस्त अघि नै खाना खाने रुची हुँदैन । राती अबेरसम्म बस्छौं । कसैले मदिरापानको अफर गरे, त्यतै रमाउँछौं । यसरी बित्ने दिनचर्यामा हामीले कहाँ आफ्नो शरीरका लागि सोच्यौं, हामीले आफ्ना स्वास्थ्यका लागि के गर्‍यौं ?
शरीरलाई स्वस्थ्य राख्न सुपाच्य खानुपर्छ, सन्तुलित खानुपर्छ, अल्पहारी हुनुपर्छ, सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ, व्यायाम गर्नुपर्छ, मौसमी फलफूल खानुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, तनावमुक्त हुनुपर्छ । तर, हामी स्वास्थ्यका लागि यी केहीपनि गर्दैनौं ।
तपाईंको मिर्गौला कुन दोकानमा पाइन्छ ?
अब खराब दिनचर्या, हेलचेक्राईको कारण तपाईंको शरीर कमजोर हुन्छ । रोग लाग्छ । शरीरका अंगहरु खराब हुन थाल्छ । मिगौर्ंलामा समस्या देखापर्छ । खराब हुँदै गएको मिगौंला बदल्नका लागि कहाँ जानुहुन्छ ? के यो बजारमा खरिद गर्न पाइन्छ ?
तपाईंका अंगहरु जब खराब हुन्छन्, चिकित्सा विज्ञानसँग त्यसको क्षणिक समाधान होला । तर, त्यो दीर्घकालिन हुँदैन । तपाईंले जन्मजात प्राकृतिक रुपमा प्राप्त गरेको अनमोल शरीर कहीँ, कतै पाउनुहुन्न । कुनैपनि मूल्यमा । तर, यति अनमोल जीवनलाई तपाईं किन वेवास्ता गरिरहनुभएको छ ?
स्वास्थ नै सम्पति
पूर्खाहरुले भन्ने गर्छन्, स्वास्थ नै सम्पति हो । चाहे तपाईंले अथाह सम्पति कमाउनु होला, तपाईंसँग करोडौं व्यांक ब्यालेन्स होला । तपाईंसँग आलिसान महल होला । तपाईंसँग आरमदायक गाडी होला । नोकरचाकर होलान् । केही कुराको कमी नहोला ।
तर, यी कुराहरुबाट त्यसबेला मात्र तपाईंले आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जब तपाईंको शरीर स्वस्थ्य हुनेछ । तपाईं तन्दुरुस्त हुनुहुनेछ । निरोगी हुनुहुनेछ ।
तपाईंको जागिरमा पदोन्नती भएको होस् वा तपाईंले कुनै जग्गा कारोबारबाट लाखौं हात पारेको होस्, ति कुराले तबमात्र खुसी दिन्छ, जब तपाईं आफुले आर्जन गरेको कुरालाई भोग गर्नका लागि सक्षम हुनुहुन्छ ।
तपाईंसँग आरमदायक कार छ । तर, विन्दास लङ ड्राइभमा जाने सामथ्र्य छैन भने, कार हुनुको के अर्थ भो । तपाईंको भान्सामै थरीथरीका व्याञ्जन पाक्छ । तर, तपाईं उच्च रक्तचाप, मधुमेहले ग्रसित हुनुहुन्छ भने त्यसको स्वाद कसरी लिनुहुन्छ ?
भनाईको अर्थ के हो भने, हामी सम्पति भन्छौं, करियर भन्छौं, घरजग्गा भन्छौं, गाडी भन्छौं, तर यी सबैकुरा प्राप्तिका लागि त्यती अन्ध नहुनुहोस् कि, शरीर एवं स्वास्थ नै कमजोर होस् । किनभने तपाईले घर, गाडी, जग्गा जगेर्ना गर्नुभन्दा शरीरलाई बलियो, तन्दुरुस्त, स्वस्थ्य राख्नुपर्छ । तब पो, तपाईले आर्जन गर्ने भौतिक सुखले आनन्द दिन्छ । तब पो तपाईले पाउने सफलताको सुखानुभूत गर्न सक्नुहुन्छ ।